Iyo kombi yemapaipi mutsetse ndiyo yechitatu chizvarwa cheyakagadziriswa chigadzirwa chaSuzhou Jwell. Kuburitswa kweiyo extruder uye yekumhanyisa kumhanyisa kwepombi zvinowedzerwa zvakanyanya ne3-20% zvichienzaniswa neyekare chigadzirwa. Kubhururuka kwepamhepo kunogona kuwanikwa kuve nechokwadi chekuita kwezvinhu zvakagadzirwa nemapombi zvigadzirwa. Inotora Nokia HMI system.
● Muchina uchangobva kugadzirwa wekuvharisa wakavharika unotora yakakosha yekukonzeresa kutonhora sisitimu yekuumba aluminium ma module, ayo anovandudza zvakanyanya kutonhorera kwekugadzira mukugadzira zvigadzirwa zvemarata;
● Kutsigira otomatiki DWC cutter, kudzora komputa, chaiyo yekucheka chinzvimbo, kugadzikana kumhanya uye nyore kushanda.
PET Bottle Flakes Kudzokorora & Pelletizing Series